Chii chinonzi Dhonza Tabhu kumaWheelchair? | Karman® Mawiricheya
Chii chinonzi Dhonza Tabhu kumaWheelchair?
Posted on October 17, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Dhonza matabhu e mavhiripu, inozivikanwa zvakare sePop Tabs ye Mawiricheya, chirongwa chinokurudzira veruzhinji kuti vatore rin'i yetab pamusoro pemhando dzose dzealuminium dzinonwa uye vagovachinjanisa ne wiricheya. Nekudaro, kune mibvunzo mizhinji uye kunetsekana kwakatenderedza danho iri. Zvakare, pane zvakacherekedza zviitiko uko iko kudhonza tebhu kwe mavhiripu vakawira pasi.
Nyika dzakasiyana dzakaparura zvirongwa zvakasiyana zvekutora aya aruminiyamu pop tabu akadai se "Sevha 1000 mhete tabo," "Project EARTH," uye "Rings for Life." Zvese zvinokurudzira veruzhinji kuti vadzokorore kwete kungobatsira Nyika chete asi kubatsira munhu anoshayiwa. Vanotanga zvakadai seizvi vese vakatanga nerunyerekupe. Zvaitendwa kuti vanhu vaiunganidza pop tabo kuti vape kuNational Kidney Foundation kuti vabatsire kubhadhara kurapwa kwema dialysis. Izvi zvakaunganidzwa kuti zvipe yekudhonza tabo enhengo dzakagadzirwa uye mavhiripu.
Saka nei uchidhonza tabo? Zvekare, internet yakatungamira vazhinji kuti vatende kuti izvi zvakakosha kupfuura izvo zvinogona kana zvese zvakakosha zvakafanana pakuzvigadzirisa nekuti zvese akaita kubva kualuminium. Padivi repafiripi zvakadaro, masangano anobatsira mazhinji achasarudza kuunganidzira iwo matabu kwete makani nekuti ivo inoda nzvimbo yekuchengetera shoma uye yakachena zvakanyanya. Mukutaura kwekukosha kuseri kwekudhonza matabhu, 1500 tabu anorema angangoita 1 pondo ichivaita kuti vakoshe madhora. Mumwe angangoda kuunganidza akawanda matabhu kuti awane zvakakwana kuvhara iyo mari a wiricheya. Zvichida ichi chikamu chekukwezva kwezvirongwa zvakaita seizvi.
Vazhinji vanoedza kuteedzera chirongwa cheichi chirongwa vanofanirwa kungwarira nerubatsiro kana nzvimbo yekushandisazve yavari kushanda nayo. Kazhinji, zvakaoma kuwana mumwe munhu senga iyo yekudhonza matabhu kunzvimbo yekudzokesa kana kutsvaga nzvimbo inovagamuchira nekuti havazi vese nzvimbo vanoita. Kana ivo vakawana nzvimbo inozogadzirisazve matabhu ekudhonza, nekuti iwo anogona kugadziriswazve, inozoonekwa gare gare kuti havana yakakwana yekufukidza iyo mutengo a wiricheya.
Izvi hazvireve kuti dhonza matabhu e mawiricheya ari hapana. Pane chirongwa parizvino muCanada chinonzi Pop Tags ye Mawiricheya. Zvinoenderana newebhusaiti yavo, ivo vakaunganidza makumi matanhatu nematanhatu ematabhu uye vane midziyo yakapihwa yevana gumi nevana, uye vasere mavhiripu marara anokwana kuita 54,138 mapaundi ealuminium kubva munaChikunguru 2018. Newebsite yavo, "Iyo Robert Hampson Tabs yevana Fund inoshanda kuunganidza mari yekutenga zvigadzirwa zvekuwanika zvevana. Tinoita izvi takabatana neIsita Zvisimbiso Ontario. ” Kune zvakare dzimba dzaRonald McDonald dzakaita zvirongwa zvakafanana neiyi.
Zvese mune zvese, kwete chete kunogona kuchengetedza kudhonza matabhu e mavhiripu kukurudzira kudzokorodza uye kubatsira munhu anoshaya, asi zvinokwanisa kuunza nharaunda pamwechete kana zvaitwa nemazvo.
Iyo Yakanyanya Simba Simba Wiricheya yeMhepo Kufamba
Zvinoshungurudza here kushandisa Wiricheya sechikamu cheCostume?